လက်ထပ်တော့မယ့် ချစ်သူ မောင်နှံတိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၅)ချက် - For her Myanmar
နံပါတ် (၄) က အသက်နော်… 😉
ဘဝ နှစ်ခု ကို မိသားစုတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစည်းလိုက်ဖို့ ပြင်နေကြပြီလား? အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း နဲ့ သက်သေပြဖို့ ရယ်ဒီ ဖြစ်နေကြပြီလား? တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ကြုံရမယ့် မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ရော စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီလား? ပြောရမယ်ဆို အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်ရတာ လွယ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု မဟုတ်ဘူးလေ။ ပြင်ဆင်စရာတွေမှ အများကြီး… ဟုတ်? ဒါဆို အိမ်ထောင်မပြုခင် ချစ်သူ နှစ်ဦးကြား ဘာတွေ မဖြစ်မနေ ကြိုတင်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေး တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
၁။ နှစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်ပါ။
ဇနီးမောင်နှံဆိုတဲ့ ဘဝ နဲ့ ချစ်သူရည်းစားဆိုတဲ့ ဘဝဟာ အလွှာပါးပါးလေးပဲ ခြားပေမဲ့ ခံစားချက်ချင်းတော့ အတော်ကို ကွာဟတာပါ။ ဆိုတော့ လက်ထပ်ပြီး ဇနီးမောင်နှံ ဘဝ မရောက်သေးခင် ကိုယ်ချစ်ရသူနဲ့ တစ်ခါလောက်တော့ ပျော်ပျော်ကြီး ခရီးထွက်ကြည့်ပါ။ အတူတူ အချိန်ဖြုန်းကြည့်ပါ။ ဒီတော့မှသာ ကိုယ့်ရဲ့ ဆိုးကွက်၊ သူ့ရဲ့ ဆိုးကွက်တွေကို တွေ့ရပြီး ဘယ်လို ညှိနှိုင်း ရှေ့ဆက်ရမယ်ဆ်ိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို တူတူ ရှာနိုင်မှာပေါ့။
ဒါတော့ ဝမ်းသာအားရ လုပ်ချင်ကြမယ် ထင်တယ်နော်.. 😀 ခရီးထွက်ရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်စေ၊ သီးသန့် Outdoor ထွက်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ဖြစ်စေ။ အကောင်းဆုံးက နှစ်ယောက်သားရဲ့ တစ်နေ့တာကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းလေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံလေးတွေကို ရိုက်ထားတာ ပိုပြီး အမှတ်တရ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ရိုက်တဲ့အခါ Prewedding နဲ့ တကယ့် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနေ့မှာ ရိုက်မယ့် ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ ရိုက်ကြည့်ပါ။ ဒါဆို နောက်ပွဲတွေအတွက်လည်း သူနဲ့ အဆင်ပြေ၊မပြေ တစ်ခါတည်း မှန်းလို့ ရနိုင်တော့ တစ်ချက်ခုတ်၊ နှစ်ချက်ပြတ်ပဲလေ။
Related Article >>> လက်တွဲဖော်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာရန်ပြေငြိမ်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)ခု
၃။ ဘဏ္ဍာရေး အကြောင်း ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နေရနေရ ဆိုပေမဲ့လို့ တကယ်တမ်း ကြပ်တည်းလာတဲ့အခါ အချစ်ဟာ နောက်ဖေးပေါက်က ခုန်ချ ထွက်ပြေးသွားတတ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဘာမှမလုပ်ရသေးခင် အရင်ဆုံး ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပါ။ ဘယ်တော့ ဘာတွေလုပ်မယ်၊ ကိုယ့်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်အတွက် ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေ ရှိတယ်၊ သူ့မှာတော့ ဘယ်လို တွေးထားတာ ရှိတယ် စတာတွေကို တိုင်ပင်ပြီး အစီအစဉ်ချပါ။ အစီအစဉ်ချတဲ့အခါ နောက်ဆုံးကလေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်တာဝန်တွေ ဘယ်လို ခွဲကြမယ်ဆိုတာကစ ပါဝင်သင့်ပါတယ်နော်..
၄။ ရင်သွေးကိစ္စ တိုင်ပင်ပါ။
ဒါက လက်ထပ်တော့မယ့် မောင်နှံတွေ မဖြစ်မနေ တိုင်ပင်ရမယ့် ကိစ္စပါ။ ကလေးယူမယ်ဆို ဘယ်နှစ်ယောက်ယူမှာလဲ။ ဘယ်လောက်ခြားပြီး ယူကြမှာလဲ။ စသဖြင့်ပေါ့… ကလေးကို ချက်ချင်း မယူသေးဘူးဆိုရင်လည်း ဘယ်နည်းနဲ့ တားကြမှာလဲ၊ ဘယ်အရာက နှစ်ယောက်လုံးအတွက် အဆင်ပြေစေလောက်မလဲ။ ဥပမာ တားဆေးသုံးမှာလား? ထိုးဆေး သုံးမှာလား? IUD ထည့်မှာလား? IUD မှာမှ ဘယ်လိုအမျိုးအစားထည့်မှာလဲ? ဒါမှမဟုတ် Implanex ပဲ ထည့်မှာလား? ဒီလိုတွေပေါ့… Implanex ဆိုတာက လက်မောင်းထဲ ထည့်ထားရတဲ့ သန္ဓေတား ပစ္စည်းလေးပါ။ ကြုံတုန်းလေး ပြောရရင် Implanex က သားကြောဖြတ်တာထက်တောင် စိတ်ချရသေးသတဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ကိုယ်နဲ့ ဘယ်အမျိုးအစားက ကိုက်ညီလဲ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်တွေ၊ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ ရပါတယ်။
မတော်တဆအမှားဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိခြင်းရဲ့ ဆင်ခြေတစ်ခုပဲ မဟုတ်လား… သတိမမူမိတာလေး တစ်ချက်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ ပျက်စီးသွားတာမျိုး လက်လျှော့လိုက်ရတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ဒီအချက်ကိုတော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ဖို့ လိုမယ် ယောင်းတို့ရေ…
ဒါလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသင်္ကာစိတ်နဲ့ စစ်ခိုင်းတာမျိုး မဟုတ်ဘူးနော်… သူ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စတာတွေကို အချင်းချင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သိထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဥပမာ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ တို့လို အခြေအနေတွေ ရှိနေတာမျိုးဆို ခုလို ဆေးစစ်လိုက်တော့ ကိုယ့်ဘက်ကနေ ရှောင်စရာ၊ ဆောင်စရာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုး ရှိသွားတာပေါ့။ နောက်ပြီး ဒါကိုလည်း အတူတူ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရင်း နှစ်ယောက်ကြားက ယုံကြည်မှုလည်း ပိုတိုးလာနိုင်သေးတယ်လေ…
ကဲ.. ဒါတွေကတော့ လက်ထပ်တော့မယ့် မောင်နှံတိုင်း လုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပါ ယောင်းတို့ရေ…
သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်…
နံပါတျ (၄) က အသကျနျော… 😉
ဘဝ နှဈခု ကို မိသားစုတဈခုအဖွဈ ပေါငျးစညျးလိုကျဖို့ ပွငျနကွေပွီလား? အခဈြတှကေို ပိုငျဆိုငျခွငျး နဲ့ သကျသပွေဖို့ ရယျဒီ ဖွဈနကွေပွီလား? တဈသကျမှာ တဈခါ ကွုံရမယျ့ မင်ျဂလာကိစ်စအတှကျရော စိတျလှုပျရှားနကွေပွီလား? ပွောရမယျဆို အိမျထောငျတဈခု ထူထောငျရတာ လှယျတဲ့ ကိစ်စတဈခု မဟုတျဘူးလေ။ ပွငျဆငျစရာတှမှေ အမြားကွီး… ဟုတျ? ဒါဆို အိမျထောငျမပွုခငျ ခဈြသူ နှဈဦးကွား ဘာတှေ မဖွဈမနေ ကွိုတငျလုပျရမလဲဆိုတာလေး တဈခကျြကွညျ့ကွညျ့ရအောငျ…
၁။ နှဈယောကျတညျး ခရီးထှကျပါ။
ဇနီးမောငျနှံဆိုတဲ့ ဘဝ နဲ့ ခဈြသူရညျးစားဆိုတဲ့ ဘဝဟာ အလှာပါးပါးလေးပဲ ခွားပမေဲ့ ခံစားခကျြခငျြးတော့ အတျောကို ကှာဟတာပါ။ ဆိုတော့ လကျထပျပွီး ဇနီးမောငျနှံ ဘဝ မရောကျသေးခငျ ကိုယျခဈြရသူနဲ့ တဈခါလောကျတော့ ပြျောပြျောကွီး ခရီးထှကျကွညျ့ပါ။ အတူတူ အခြိနျဖွုနျးကွညျ့ပါ။ ဒီတော့မှသာ ကိုယျ့ရဲ့ ဆိုးကှကျ၊ သူ့ရဲ့ ဆိုးကှကျတှကေို တှရေ့ပွီး ဘယျလို ညှိနှိုငျး ရှဆေ့ကျရမယျဆိုတဲ့ နညျးလမျးတှကေို တူတူ ရှာနိုငျမှာပေါ့။
ဒါတော့ ဝမျးသာအားရ လုပျခငျြကွမယျ ထငျတယျနျော.. 😀 ခရီးထှကျရငျး ဓာတျပုံရိုကျတာပဲဖွဈစေ၊ သီးသနျ့ Outdoor ထှကျရိုကျထားတဲ့ ပုံလေးတှေ ဖွဈစေ။ အကောငျးဆုံးက နှဈယောကျသားရဲ့ တဈနတေ့ာကို ဘယျလို ဖွတျသနျးလရှေိ့တယျဆိုတဲ့ ပုံစံလေးတှကေို ရိုကျထားတာ ပိုပွီး အမှတျတရ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ နောကျပွီး ရိုကျတဲ့အခါ Prewedding နဲ့ တကယျ့ မင်ျဂလာဆောငျပှဲနမှေ့ာ ရိုကျမယျ့ ဓာတျပုံဆရာနဲ့ ရိုကျကွညျ့ပါ။ ဒါဆို နောကျပှဲတှအေတှကျလညျး သူနဲ့ အဆငျပွေ၊မပွေ တဈခါတညျး မှနျးလို့ ရနိုငျတော့ တဈခကျြခုတျ၊ နှဈခကျြပွတျပဲလေ။
Related Article >>> လကျတှဲဖျောနဲ့ပွဿနာဖွဈတိုငျး ငွိမျးခမျြးစှာရနျပွငွေိမျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျး(၅)ခု
၃။ ဘဏ်ဍာရေး အကွောငျး ဆှေးနှေးပါ။
ဘယျလောကျပဲ တူနှဈကိုယျ တဲအိုပကျြမှာ နရေနရေ ဆိုပမေဲ့လို့ တကယျတမျး ကွပျတညျးလာတဲ့အခါ အခဈြဟာ နောကျဖေးပေါကျက ခုနျခြ ထှကျပွေးသှားတတျပါတယျ။ ဆိုတော့ ဘာမှမလုပျရသေးခငျ အရငျဆုံး ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆှေးနှေးပါ။ ဘယျတော့ ဘာတှလေုပျမယျ၊ ကိုယျ့မှာ စီးပှားရေးနဲ့ အလုပျအကိုငျအတှကျ ဘယျလို အစီအစဉျတှေ ရှိတယျ၊ သူ့မှာတော့ ဘယျလို တှေးထားတာ ရှိတယျ စတာတှကေို တိုငျပငျပွီး အစီအစဉျခပြါ။ အစီအစဉျခတြဲ့အခါ နောကျဆုံးကလေးရပွီးတဲ့အခြိနျမှာ အလုပျတာဝနျတှေ ဘယျလို ခှဲကွမယျဆိုတာကစ ပါဝငျသငျ့ပါတယျနျော..
၄။ ရငျသှေးကိစ်စ တိုငျပငျပါ။
ဒါက လကျထပျတော့မယျ့ မောငျနှံတှေ မဖွဈမနေ တိုငျပငျရမယျ့ ကိစ်စပါ။ ကလေးယူမယျဆို ဘယျနှဈယောကျယူမှာလဲ။ ဘယျလောကျခွားပွီး ယူကွမှာလဲ။ စသဖွငျ့ပေါ့… ကလေးကို ခကျြခငျြး မယူသေးဘူးဆိုရငျလညျး ဘယျနညျးနဲ့ တားကွမှာလဲ၊ ဘယျအရာက နှဈယောကျလုံးအတှကျ အဆငျပွစေလေောကျမလဲ။ ဥပမာ တားဆေးသုံးမှာလား? ထိုးဆေး သုံးမှာလား? IUD ထညျ့မှာလား? IUD မှာမှ ဘယျလိုအမြိုးအစားထညျ့မှာလဲ? ဒါမှမဟုတျ Implanex ပဲ ထညျ့မှာလား? ဒီလိုတှပေေါ့… Implanex ဆိုတာက လကျမောငျးထဲ ထညျ့ထားရတဲ့ သန်ဓတေား ပစ်စညျးလေးပါ။ ကွုံတုနျးလေး ပွောရရငျ Implanex က သားကွောဖွတျတာထကျတောငျ စိတျခရြသေးသတဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ကိုယျနဲ့ ဘယျအမြိုးအစားက ကိုကျညီလဲ သိခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျတှေ၊ တတျကြှမျးနားလညျသူတှနေဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီး ဆုံးဖွတျလို့ ရပါတယျ။
မတျောတဆအမှားဆိုတာ ကွိုတငျပွငျဆငျမှု မရှိခွငျးရဲ့ ဆငျခွတေဈခုပဲ မဟုတျလား… သတိမမူမိတာလေး တဈခကျြကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ အိပျမကျတှေ ပကျြစီးသှားတာမြိုး လကျလြှော့လိုကျရတာမြိုး မဖွဈစဖေို့ ဒီအခကျြကိုတော့ မဖွဈမနေ လုပျဖို့ လိုမယျ ယောငျးတို့ရေ…
ဒါလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မသင်ျကာစိတျနဲ့ စဈခိုငျးတာမြိုး မဟုတျဘူးနျော… သူ့ကနျြးမာရေးအခွအေနေ၊ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးအခွအေနေ စတာတှကေို အခငျြးခငျြး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး သိထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဥပမာ အသညျးရောငျ အသားဝါ ဘီ တို့လို အခွအေနတှေေ ရှိနတောမြိုးဆို ခုလို ဆေးစဈလိုကျတော့ ကိုယျ့ဘကျကနေ ရှောငျစရာ၊ ဆောငျစရာတှကေို ကွိုတငျပွငျဆငျလို့ ရနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးမြိုး ရှိသှားတာပေါ့။ နောကျပွီး ဒါကိုလညျး အတူတူ ဘယျလို ရငျဆိုငျကွမလဲဆိုတာကို တိုငျပငျဆှေးနှေးရငျး နှဈယောကျကွားက ယုံကွညျမှုလညျး ပိုတိုးလာနိုငျသေးတယျလေ…
ကဲ.. ဒါတှကေတော့ လကျထပျတော့မယျ့ မောငျနှံတိုငျး လုပျကိုလုပျသငျ့တဲ့ အခကျြလေးတှပေါ ယောငျးတို့ရေ…
သာယာပြျောရှငျတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစနေျော…
Tags: Knowledge, Relationship, tips